Shir looga hadlay Horumarinta JPLG
20 Feb 20, 2013 - 1:03:46 AM
Xarunta Madaxtoyda Garowe ayaa maanta 20 February,2013 lagu qabtey kulan looga hadlayey Horumarinta barnaamijka Degmooyinka Puntland ka socda ee Qaramada Midoobey wado JPLG.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen.Cabdisamad Cali Shire ayaa shir gudoominayey ,waxana ka soo qaybgalay wasiirka Arrimaha Gudaha Gen.Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir ,wasiirka Qorshaynta Dr,Daa'uud Maxamed Cumar ,Wasiirka Gaadiidka iyo Hawlaha guud Eng.Daahir Xaaji Khaliif ,wasiir ku xigeenka Haweenka Caasho Maxamuud Axmed iyo hawlwadeenada Mashruucan.
Degmooyinka Bossaso ,Qardho ,Garowe ,Eyl ,Bayla ,Jariiban iyo Galkacayo oo golle deegaan laga sugayo ayuu ka shaqeeyaa Mashruucan ay ku midoobeen shan hayadood oo ka mida Qaramada Midoobey.
Kulankan ayaa si gaar ah looga hadlayay Baahinta Xukunka deegaanada fog fog oo Dowladaha hoose ,madaxda Maamulka iyo wasaraadaha bahwadaagta ahi ka doodeen islana falanqeeyeen qaabka ugu haboon ee loo dardargelin karo shaqada.
Dhowaan ayaa shan sanno oo kale lagu darey mashruucan oo badi awood dhaqaale siiyaa dowladaha hoose ee degmooyinka uu ka shaqeeyo.
Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland Gen.Cabdulaahi Ilkajiir ayaa ku tilmaamay JPLG mid faa'ido badan u keeney bulshada Puntland isagoona tilmaamayey wadooyinka .suuqada laga hirgeliyey iyo mashaariicda kale ee la socota.
Horey ayaa "Joint Program Local Goverments'' JPLG waxa u amanaay Madaxweynaha Puntland waxqabadkiisa ,isagoona sheegey inuu yahay mid kamida mashaariicda dhaqalahooda gacanta loo geliyo Puntland si u dhistaan una horumarsadaan deegaankooda.